Ambohitrantsingy Antsiranana: efa-dahy tratra tanaty faritra arovana | NewsMada
Ambohitrantsingy Antsiranana: efa-dahy tratra tanaty faritra arovana
Nahitam-bokany ny fisafoana nataon’ny mpikambana ao anatin’ny Vondrona olona ifotony (VOI) sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana tany amin’ny faritra arovana (AP) any Ambohitrantsingy Montagne des Français (MDF), ny herinandro lasa teo. Naharitra telo andro ny fisafoana, niarahan’ny mpiasafo ala, ny mpitandro filaminana ary ny mpitantana ny ala ka nahatrarana olona efa-dahy. Nikapa hazo sady nanao saribao tao anaty faritra tsy azo idirana sy kasihina ny roa lahy.
Tratra teo am-pikapana hazo tao afovoan’ala antsoina hoe “Abattoir-n’i Pierre” ny iray hafa. Tratra teo am-pivoahana avy any afovoan’ala kosa ny faninefany, avy nanangona voninkazo “orchidée” izay voararan’ny lalàna rahateo.
Andrasana ny didim-pitsarana mikasika azy ireo. Tsiahivina fa maro tokoa ny fikapana ny hazo tsy ara-dalàna any Ambohitrantsingy. Mitaraina anefa ny mpiaro ny tontolo iainana satria votsotra foana matetika nireo mpanimba ala.